Ngosiputa Ngwa Nzuzo | Ngosiputa Ngwa & Ịdị Mma | Foto ndị na-acha agba agba maka nbudata
Nlekọta anụ ahụ site na isi ruo ụkwụ
Isi ude mmiri
A na-eji ihe ndị e kere eke na-eme ihe dị iche iche site na okike. Ọ bụghị nanị na ọ bụghị nanị na ihe ndị a na-enye echiche nke ọdịmma, ma ha na-emerụkwa ahụ site na ihe ndị e ji eme ihe. Ọchịchọ maka ọdịdị obibi ndụ, nke na-adigide na ndụ dị mma na-eto eto, ya mere, ihe ịchọpụta ihe dị mma na-aghọwanye ndị dị ugbu a ma bụrụ ndị a ma ama.
Kedu ka ị si amata ihe ịchọ mma nkịtị?
Edeghị ihe ịchọ mma nke anụ ahụ site na iwu, ya mere ọ dịghị akara akara edo. Enwere otutu nkowa aha ndi ozo site na ulo oru ndi na-eduhie mgbe ị zụrụ ha. Ka o sina dị, e kere ụfọdụ ihe akaebe a tụkwasịrị obi n'oge. Ihe ndị a na-emepụta site na nsị nke ngwaọrụ iji nhazi ngwaahịa ndị dị na ya. Ya mere, ị nwere ike ịchọta ihe ịchọ mma nke anụ ahụ ozugbo na akara.
Ma ọ dị mwute, ọ bụghị naanị akara. Nke ahụ na-eme ka ọ dịkwuo ike karị. Otú ọ dị, i nwere ike iche na ihe niile e ji eme ihe na-enweta site na ngwaahịa ndị nwere akara site na okike. A pụrụ ịmepụta abụba, wax, mmanụ, na agba na ísìsì site na ịnweta, ihe oriri na ihe ole na ole sitere n'ihe ndị anụmanụ. Taboo bụ paraffins, silicones, ihe ndị e mere anụ na irradiation redio. Ihe nkocha nke oma gụnyere "NaTrue", "Na-achịkwa Ngosiputa Ihe Nzuzo" na "EcoCert".
Mma site na okike ka nma
N'ihe ntecha na-edozi ahụ bụ ihe ndị na-eme ka hormona nwere ike ịkpata mmetụta na ọbụna ọrịa. Na onyonyo a kwadoro, ihe ndị a adịghị njọ. Ma ndị nkatọ na-ekwu na mmadụ amaghị otú ihe ndị ahụ si emeghachi na ngwaahịa ndị ọzọ. Na ihe ịchọ mma nke anụ ahụ, a na-egbochi ihe ndị a na-arụ ụka. Ma ọbụna ihe ịchọ mma nke anụ nwere akụkụ dị mkpa nke dị mkpa nke nwere ike ịkpalite allergies. O nweghị onye nwere ike igosi na ihe ịchọ mma ma ọ bụ ihe ịchọ mma nkịtị dị mma.
Ihe dị iche iche nke ihe ịchọ mma
N'ihe nhazi ihe ndi ozo, e nwere ihe nile ndi mmadu mara ma choro. Ndị a na-agụnye ihu na nlekọta anya, ntutu ntutu, ime-elu na lipstick, nchacha ahụ, ncha, nchịkwa aka, nlekọta anyanwụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Karịsịa anụ ahụ anyị kwesịrị nlezianya na-elekọta ma jiri nlezianya na-elekọta. A na-ekpughe ya kwa ụbọchị na mmetụta ndị na-emerụ ahụ gburugburu ebe obibi. Akpụkpọ ahụ na-etinye ihe niile dị na ya ma na-ebuga ha n'ime ahụ. Ngosiputa Ngwa nwere chemicals nwere ike imerụ akpụkpọ ahụ. Ngwongwo ihe ndi ozo, n'aka nke aka, kwadoro ma mee ka aru anyi di nma ma mee ka o maa nma ma di ire.
Ghọta onwe gị na ịma mma nke okike. Ihe kachasị mma bụ ihe ịchọ mma dị ka onyinye na ihe dị nnọọ iche.
Ọghọm nke ihe ịchọ mma
Na nhazi ihe ndi ozo, ị ga-achọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye na-adịghị adịgide adịgide ma ọ bụ mmiri mascara. Ọbụna mbara igwe nke nwere nchebe anyanwụ nke na-adabere na 20 ma ọ bụ na-egbukepụ egbuke egbuke ị ga-achọ n'efu. A naghị ekpochasị gels gels na shampoos na ụfụfụ na ntutu isi. Silicones na powders na-esikarị njọ mgbe ụfọdụ. Ọbụna ejiji ntutu ntutu isi nwere ihe ọghọm, isi awọ adịghị apụ kpamkpam na ntutu dị ọkụ na agba adịghị ekwe omume.
Ndị na-azụ ahịa na-achọwanye nlekọta anya ma na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe na-edozi ahụ. Ọkpụkpọ anyị hụrụ n'anya ka a lekọtara anyị nke ọma na ọkacha mma site na akụ ndị sitere n'okike. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye ihe ịchọ mma nkịtị na omume na-aga n'ihu.
Nlekọta anụcha na mmanụ aki oyibo
Ihe Ngosiputa N'ucha maka anu mara mma
Mmiri oyi oyi bara ọgaranya ma nye ọtụtụ mmiri. Nke a dị mma maka nlekọta ntutu isi. Dị ka ọnọdụ ntutu isi, ọ nwere ike itinye ya na ntutu isi mgbe a na-akpụ ya. Iji gbazee ya ị nwere ike idozi ya na ibe gị. Ọ kacha mma ịhapụ mmanụ aki oyibo na ntutu maka awa ole na ole. Ogologo oge, oge ka mma.
Mgbe ekpughechara, a ghaghị ịchacha ntutu nke ọma ka ọ ghara inwe mmanu ọzọ. N'ihe dị ka ntutu isi na-egbuke egbuke ga-esi na ya pụta. Enweghi ike iji ihe ndi ozo na-eme ihe maka ntutu isi, o na-abakwa uru nke anu. Maka nlekọta antibacterial Njirimara ma mara ya. A pụrụ iji mmanụ aki oyibo mee ihe maka ahụ dum. Ihu, egbugbere ọnụ, aka, ụkwụ, ahụ dum ga-enwe obi ụtọ mgbe nlekọta na-esi ísì ụtọ. Akụkụ akụkụ ndị kachasị akpọrọ ngwa ngwa na-adị nro ma dị nro ọzọ. Onodu aku na uba kwesiri ka o jiri mmanu mmanu mee ihe.
Nri aki oyibo bu nlebara anya site na isi rue ukwu. Enwere ike iji ya mee ihe maka ahụ dum, ya mere ọ dịkwa mma.
Zụrụ mmanụ ezi aki oyibo
Ị nwere ike ịzụta mmanụ aki oyibo na ụlọ ahịa nri na ọgwụ. Mgbe ị na-azụrụ, ị ghaghị ijide n'aka na ọ bụ n'efu.
Nlekọta anya nke anụ ahụ kwa ụbọchị na-amalitekarị na ude mmiri. Mmiri ahụ dị n'ime ihe ịchọ mma nkịtị nwere ihe ndị dị ka mmanụ soybean, shea butter na mmanụ almond. A na-ehicha akpụkpọ ahụ site na mmiri nke ihe ọkụkụ na-akpata ogologo oge. Nlekọta siri ike na nchebe anụ ahụ kachasị mma na-enye site na vitamin C na E.
Ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ dị akọrọ, ị ga-eji ogwu dị mma karịa ahụ.
N'ihi na akpọrọ akpụkpọ na ahụ bọta a nwapụtara. O nwere mmanụ Macadamianus, nke na-enye anụ ahụ nri ma na-enye ebe akọrọ na mmiri mmiri zuru ezu. Site n'iji ihe di iche iche nke ifuru ahihia, enwere mmetuta nke akpụkpọ ahụ ma chebe akpụkpọ ahụ.
Ọdịdị nke oge na-adịghị mkpa chọrọ mkparịta ụka mgbe niile. N'ihi na onye na-elekọta anụ ahụ na-eji ngwaahịa ndị nwere algae dị iche iche, ihe mgbagwoju anya nke mineral water and glycerine vegetable for regulation.
Nlekọta nke anu aru na-etowanye. Ọ bụ isi iyi nke ntorobịa maka ahụ na anụahụ.
Mee ihe ịchọ mma nke onwe gị
Ntuziaka ihe eji edozi ihe maka ulo